Basa reECG reApple Watch rinoponesawo hupenyu muEurope | Ndinobva mac
Basa reECG reApple Watch rinoponesa hupenyu muEurope zvakare
Isu takaverenga ndokukuudzai nyaya zhinji nezvekuti Apple Inotarisa sei yakaponesa vanhu. Kutenda ku basa rayo reECG (Electro Cardiogram). Asi isu takagara tichitaura nezvenyaya idzi dzakaitika muUS. Nekudaro izvozvi isu tinowana hupenyu hwakaponeswa nekuda kweApple Watch muEurope.
Mainz, Jerimani. Mukadzi anoponesa hupenyu hwake nekuda kweECG mashandiro eApple Watch.
Basa reECG reApple Watch rakaunzwa nekuuya kweApple Watch nhepfenyuro 4. Chekutanga muUS uyezve pasirese. MuUS munotova nenzvimbo dzekurapa dzinoshandisa zviyero zvewachi sehumwe humbowo uye vanogona kutotumirwa pamhepo kuna chiremba, nekutevera.
MuEurope, zvinhu zviri kunonoka kubata iyo Apple Watch seimwewo imwe yekurapa. Zvisinei iyi nhau, inogona chinja zvinhu.
Mukadzi octogenarian akaponesa hupenyu hwake nekutenda kune zviyero zveiyo wachi yeECG. Akanzwa kusagadzikana ndokuenda kuUniversity Hospital ye Mainz, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGerman, kumahombekombe eRwizi Rhine.
Ikoko havana chavakaona mune bvunzo dzavakaita. Asi mukadzi haana kukanda mapfumo pasi ndokuratidza vanachiremba chiyero chakatorwa neECG yeApple Watch nguva pfupi yadarika. Ikoko vakawana anomaly.
Vakaita mimwe miedzo mipfupi uye zvirokwazvo mukadzi aive ne coronary kusagadzikana kuti akabatwa zvinobudirira, uye mukadzi wacho akakwanisa kudzokera kumba kuti arambe achinakidzwa noupenyu.
Chokwadi ichi chakaratidzirwa mu European Hutano Zvinyorwa y inopedzisa kuti Apple Watch inogona kushandiswa kuona myocardial ischemia. Kufambira mberi kukuru, pasina kupokana, izvo zvinotiisa padhuze nepadhuze nemaAmerican kana zvasvika pakushandisa wachi yedu seimwe nhare yekurapa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reECG reApple Watch rinoponesa hupenyu muEurope zvakare
Yekhibhodi mapfupi eiyo macOS Podcast app
Tim Cook Anotaura kuOhio University Vakapedza kudzidza